Raha ny loharanom-baovao iray dia voalaza fa mety ho ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana Tazafy Armand no hiakatra eo amin’ny toeran’ny praiminisitra. Mety hiverina ho minisitry ny atitany tsotra kosa i Mahafaly Solonandrasana Olivier na alefa masoivoho any ivelany.
Mbola adihevitra be anefa ny any an-dapa, araka ny loharanom-baovao iray, ary re fa mikendry mafy ny ho lasa masoivohon’i Madagasikara any Parisy Frantsa ny praiminisitra ankehitriny. Misy olona tena akaiky ny filoha ihany koa anefa maniry mafy io toerana io, ka zary lasa misy ankolafy mihitsy ny mpikamban’ny governemanta, raha ny resaka mivoaka avy any an-dapa hatrany. Re fa mety homena io toerana io ny minisitry ny raharaham-bahiny Atallah Béatrice, izay namana akaikin-dRajaonarimampianina, ary efa niteraka resabe ny nanendrena azy ho minisitra. Tsiahivina fa izy no filohan’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana ho an’ny tetezamita (CENIT), ary voatendry ho minisitra avy eo. I Mahafaly Solonandrasana Olivier kosa anefa, dia efa ela no nandeha ny resaka amin’ny hanalana azy, saingy tsy nety tanteraka hatrany. Raha ny tantara rahateo no zohiana dia anisan’ny andry lehibe tamin’ny fanamafisana orina ny fitondrana Rajaonarimampianina sy ny HVM izy, ary azo lazaina ho valim-babena avy amin’ny filoham-pirenena ny nanendrena azy ho praiminisitra. Samy miandry izay hiseho ny mpanara-baovao. Mihorohoro tanteraka ihany koa ireo minisitra tsy dia tena akaiky ny filoham-pirenena noho ny tahotra ny ho very seza amin’ny fanovana governemanta. Na ny samy minisitra aza dia voalaza fa efa misy tsy mifankahazo noho ity resaka ity satria misy ny miezaka misolelaka an’ny filoha sy mahazo avara-patana ary ao ny mahatsapa tena atao anjorom-bala. Ary farany kanefa tsy bitika dia tsy afa-miala amin’ny raharaha Claudine Razaimamonjy i Solonandrasana Mahafaly izay minisitry ny atitany sy ny fanapariaham-pahefana. Lasa tahaka ny tsilo eo an-tongotry ny filoham-pirenena sy manaratsy endrika ny fitondram-panjakana iray manontolo ary mampiahotra ny mpamatsy vola ny fijanonany ao Mahazoarivo, araka izany.